ပြောသင့်တဲ့စကားနဲ့ မပြောသင့်တဲ့စကားဆိုတာကို လူတိုင်းသာသိထားရင် – Trend.com.mm
Posted on January 15, 2018 by Wint
စကားဆိုတာ ပြောလိုက်တဲ့လူအတွက်တော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် နားထောင်ရတဲ့လူအတွက်တော့ စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်တယ်.. တစ်ဖက်မှာ စိတ်အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် သူတို့အတွက် စိတ်တိုစရာ၊ ဒေါသထွက်စရာ ၊ ခံပြင်းစရာတွေဖြစ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မပြောခင်သေချာစဉ်းစားဖို့ နဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း စကားကိုလွှတ်ခနဲမပြောလိုက်သင့်ဘူး။
ကိုယ့်စကားကြောင့် တစ်ဖက်လူပျော်ရွှင်ရတော့ မကောင်းဘူးလား ?ဒီတော့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကို သတိထားနိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
လူတစ်ယောက်က အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီအမှားကို သင့်အနေနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ခံစားရတယ်မလား? ချက်ချင်း သင့်စိတ်ထဲပေါ်လာတာက ” ငါနင့်ကိုပြောသားပဲ.. ငါ့စကားမှနားမထောင်တာ ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေကို အရင်ဆီးပြီး ပြောဖို့စဉ်းစားနေပြီလား ? သူတို့ဘာသာ အသိတရားရပါစေ…သင်ပြောတာမှန်ကန်ကြောင်း ၊ သင်ဟာ သူ့ထက်အရာရာမှာရှေ့ကြိုမြင်နိုင်ကြောင်းပေါ့။ ခုနကတိုင်းသင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့ဆီက သင့်ကိုချီးကျုးစကား ကြားချင်မှကြားရလိမ့်မယ်..
ဘယ်လိုတောင်းဆိုမှုမျိုးမဆို သင့်ဘက်က အိုကေ တစ်လုံးတည်းသာတုံ့ပြန်ရင် အကူညီတောင်းတဲ့လူရဲ့ မျက်လုံးမှာ သင့်ကိုကျေးဇူးတင်မယ့် အငြိမ်ယောင်တွေ မြင်နေရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ အိုကေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ငါနောက်မှလုပ်လိုက်မယ် လို့သက်ရောက်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး.. ဒါပေမယ့်
ဒီစကားစုဟာ မချိုသာတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောဖို့ ရှေ့ ကြိုကာထားတဲ့သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ တောင်းပန်စကားပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အသွင်ပြင်ကို ရှုံ့ချချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအမြဲပြောကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မလှဘူးလို့ ပြောရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး။ တခြားဟာလေး ပြောင်းဝတ်ကြည့်ပါလားလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်စားလို့ သင်က ”အဲ့ဒါ ဘာလဲ ” ဘာညာလှမ်းမေးကြည့်ရင် နင်သိမှမဟုတ်ပါဘူး… နားလည်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ? ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ်သူမှကိုယ့်ကို အသုံးမ၀င်သလို လာပြုမူရင် မကြိုက်ကြပါဘူး။ အသိမှတ်ပြုပေးပါ.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို။ ကိုယ့်ဘက်က စသလို၊ နောက်သလိုပြောပေမယ့် တစ်ဖက်အတွက် အတည်ခံစားသွားရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။
တစ်ဖက်က ပြောတာကို သင်မေ့ကောင်မေ့လိမ့်မယ်။ အခုခေတ်က ကလေးပိစိလေးတွေကအစ မှတ်ဥာဏ်သိပ်ကောင်းတော့တာမဟုတ်ဘူး။ လူငယ်တွေဆို ပိုဆိုးပေါ့။ အာရုံတွေက ထွေပြားတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ၊သူပြောတဲ့စကား မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိမယ်။ တစ်ဖက်က သူပြောပြီးသွားပြီလို့
ပြောရင် သင်မငြင်းပါနဲ့။ ”သြော် ဟုတ်လား.. အခုအဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်မယ်…” စသဖြင့် နားထောင်ကောင်းတဲ့ စကားမျိုးတွေ သုံးလို့ရတယ်နော်။
ကိုယ်မကြားချင်တဲ့ စကားကို ထပ်တလဲလဲလာပြောနေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်ကြပါတယ် လူတိုင်း။ ဒါပေမယ့် အပြုအမူ ၊မျက်နှာ အနေထားတွေ… ။အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထား တစ်ချက်ပျက်တာနဲ့ ဟိုဘက်က ပြောရမယ့်စကားတွေတန့်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ ဘယ်လိုပဲ
ဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်ပြောစကားကို တလေးတစားနားထောင်ပေးပါ။ ကြားဖြတ်ပြီး စိတ်ပျက်သလိုပုံစံမျိုး မပြုမူပါနဲ့။